China Insert Kuumbwa Mugadziri uye Mutengesi Mestech
Insert Kuumbwaepurasitiki jekiseni Kuumbwa kwacho uko plastiki inojowa mukati mevhu uye kutenderedza chidimbu kana zvidimbu zvakaiswa mudumbu rimwe chete pamberi pekuumbwa. Chigadzirwa chinoguma cheichi chiitiko chidimbu chimwe chete neinoisa kana inoisirwa yakavharirwa nepurasitiki.
Kuisa kuumba kunowedzera kugona kwepurasitiki uye kunogona kubatsira kudzikisa mutengo wezvigadzirwa nekudzikisira huwandu hwesimbi inodhura inodiwa kugadzira zvigadzirwa. Kuisa kunogona kugadzirwa nesimbi kana imwe plastiki. Rudzi urwu rwekuumba rwakatanga kugadzirirwa kuisa zvakasungirirwa zvakapetwa muzvikamu zvakaumbwa uye kuputira waya-plug yekubatanidza pane tambo dzemagetsi.
Isu tinowedzera nzira iyi yekuumba kuti tiite zvinhu izvo vamwe vasaumbi vasingakwanise kana kusazo.
Zvichienderana nesaizi yechikamu, yakawanda-mhango mold inogona kugadzirwa kuwedzera kugadzirwa. Sekondari post yekuumba mashandiro dzimwe nguva anodikanwa kupedzisa gungano.
Pinza kuumbwa ndiyo nzira yekuumba iyo iyo chakuvhuvhu inoshandiswa kupinza resini mune yakagadziriswa yekuisa nezvinhu zvakasiyana, uye iyo yakanyungudutswa zvinhu inosanganiswa neiyo yekuisa kuti iite chigadzirwa chakabatanidzwa. Yakabatanidzwa zvikamu zvinowanzo kuve zvikamu zvesimbi, asi zvakare jira, bepa, waya, plastiki, girazi, huni, waya mhete, magetsi zvikamu.
Maitiro acho eIisa Kuumba anotevera:
1. Izvo zvinodikanwa kufunga nezve mubatanidzwa uye wekuwedzera weiyo resini iri nyore kugadzikana, kukombama, kuomarara kwesimbi, simba uye kupisa kupisa, kuitira kuti iite yakaoma uye yakasarudzika simbi yepurasitiki yakasanganiswa chigadzirwa.
2. Kunyanya, iko kusanganiswa kweinosungirwa sisitimu uye simbi conductivity inoshandiswa, uye zvigadzirwa zvakaumbwa zvinogona kusangana nemabasa ekutanga ezvigadzirwa zvemagetsi.
3. Iyo yekutanga inogadzira musanganiswa weakawanda kuisa inoisa iyo posvo mainjiniya yechigadzirwa unit musanganiswa zvinonzwisisika.
4. Isa zvigadzirwa hazvingogumira kune simbi, asiwo machira, bepa, waya, plastiki, girazi, huni, coil, magetsi zvikamu, nezvimwe.
5. Kune akaomarara zvigadzirwa zvekuumba uye iyo inokombama michina yekumonera pane irabha yekuisa mucheka ndiro, kushanda kwakaomarara kwekurongedza mhete dzekuisa chisimbiso kunogona kudzivirirwa mushure mekuti zvigadzirwa zvakasanganiswa zvinoitwa nejekiseni kuumba pane substrate, izvo zvinoita kuti otomatiki mubatanidzwa maitiro anotevera ari nyore.
6. Nekuti iwo mubatanidzwa wezvinhu zvakaumbwa uye simbi inoiswa, musiyano uripo pakati pekuisa simbi unogona kugadzirwa wakadzikira uye kuvimbika kwekuumba kwezvinhu zvinogadzirwa kwakakwira kupfuura uko kwekudhinda mukuumba ..
7. Sarudza yakakodzera resin uye mamiriro ekuumba, ndiko kuti, kune zvigadzirwa zviri nyore kukuvara (senge girazi, coil, zvikamu zvemagetsi, nezvimwewo), zvinogona zvakare kuiswa chisimbiso nekugadziriswa neresini.
8. Nemubatanidzwa weiyo jekiseni jekiseni kuumbwa muchina uye manejimendi, iyo yese seti yekuisa uye zvichingodaro, mazhinji epfungwa yekuisa mapurojekiti anogona kuona otomatiki kugadzirwa.
9. mushure mekuiswa kwayakagadzirwa, inogona zvakare kugadzirwa kuita zvigadzirwa zvine maburi grooves mushure mekukosha gomba kubvisa kurapwa.
Matipi pane echikamu dhizaini uye chakuvhuvhu chekupinza kuumbwa
1. Zvishandiso zvinodiwa zvekuisa: kuomarara, nzvimbo yekunyungudika, kuomarara, shrinkage
2. Kunyangwe chimiro uye saizi yekuisa iri nyore kutora, kuisa uye kuisa. Dhizaini yezvikamu ichave nyore kumisikidza nekugadzika muforoma kudzivirira zvikamu kubva pakatsauka kana kusununguka pasi pekukanganiswa neiyo inoyerera resin.
3. Kugadzira kururamisa uye kuenderana kwekuisa
4. Sarudza chimiro chakakodzera chomuumbwe, uye zvinoiswa zvinogona zvakare kuvharwa zvachose muresini.
5. Iko kuumba kuderera kwesimbi yekuisa kuri nyore kusaenzana. Iyo muganho bvunzo yechimiro uye saizi kurongeka kwezvakakosha zvikamu zvinofanirwa kuitwa pamberi.
6. Panguva yekuita jekiseni, iyo simbi yekuisa iri nyore kuumbika uye kusuduruka, saka kuumbwa kweforoma uye dhizaini yeforoma chimiro izvo zviri nyore kuchengetedza iyo simbi yekuisa inofanirwa kutariswa zvizere. Kune zvigadzirwa zvine chimiro chekupinza chisingakwanise kuchinjwa, bvunzo yekutanga isati yakosha.
7. Simbisa kana simbi yekuisa inoda kupisa kana kuomesa kurapwa. Chinangwa ndechekuona mhando yechigadzirwa uye kugadzikana.
Metal muwedzero Kuumbwa Simbi yekuisa yekuisa ndiyo inonyanya kushandiswa yekuisa maitiro ekuumba.
Simbi yekuisa kuumbwa imhando yenzira yekugadzirisa simbi yekuisa munzvimbo chaiyo muchimiro pamberi, wozobaya purasitiki yekuumba. Mushure mekuvhurwa kweforoma, iyo inoputirwa yakaputirwa muchigadzirwa nekutonhora uye kuomesa mapurasitiki kuitira kuti chigadzirwa chiiswe seyakaiswa tambo uye electrode.
Zvinotarisirwa kuti zvikamu zvemidziyo yesimbi yakaiswa mukati zvinofanirwa kunge zvine chimiro uye ukobvu, uye zvikamu zvekuisa mukati meforoma zvinogona kukurumidza uye zvakavimbika kumisikidza kudzivirira plastiki kuti isayerere ichienda mumakomba ekugadzirisa. Iyo inoisa inodawo kuve yakanyatsogadzirwa, senge kukwikwidza, kubvongodza, kumonyanisa, nezvimwewo muzvikamu zvakadzamirwa kuti ive nechokwadi chekugadziriswa kwavo kwechokwadi mukati mepurasitiki.
Yakagadziriswa simbi yekuisa zvikamu zvekuumba:
Mestech mashandisirwo akasarudzika ekupinza kuumbwa .. Ndapota taura nesu kuti tikubatsire iwe kuwana chaiyo yekuisa yekuisa mhinduro yekushandisa kwako.
Power chivhariso muwedzero jekiseni Kuumbwa
Mhangura nut isa muumba
Nemazvo simbi ndiro muwedzero Kuumbwa
Simbi nati muwedzero Kuumbwa
Pashure: In-Mould Kushongedza-IML
Zvadaro: Metal prototype
3d Akadhindwa Mould Inoisa
Jekiseni Kuumbwa Threaded Kuisa
Insert jekiseni richigadzirisa
Inochinjika Mould Inoisa